“Dawlada dhexe waxaa ay diyaar u tahay wada-shaqayn buuxda in ay la timaado” M/weyne Shariif. – Radio Daljir
“Dawlada dhexe waxaa ay diyaar u tahay wada-shaqayn buuxda in ay la timaado” M/weyne Shariif.
Agoosto 28, 2011 12:00 b 0
Garowe, Aug 28 – M/weynaha dawlada federaalka ah ee Somaliya Shariif Sh. Axmed oo safar haeed uga bilawday gobollada Puntland ayaa ka hadlay safark
Mar uu ka hadlay mugdiga hareeyey xiriirka u dhexeeya Puntland iyo dawlada federaalka ah ayaa uu sheegay in aanu jirin khilaaf u dhexeeya madaxda labada dhinac, balse ay jiraan tuhumo aan ku salaysnayn xaqaa’iq dhab ah.
“Waxaa rabaa in aan idiin xaiijiyo Puntland weligeena xumaanteeda kuma fikirin, mana ku fikirayno …waxayna ka mid tahay meelaha aan ku faano” ayaa uu yiri.
” …laakiin bini’aadamku haddii uu kala maqan yahay, waxaa laga yaabaa waxyaalo badan in uu iska tasawiro maskaxiidsa” ayaa uu ku daray.
Mar uu ka hadlay horumarka Puntland ayaa uu xusay in nabada iyo horumarka ka jira Puntland uu yahay mid manfac u leh dhammaan ummadda Somalida.
“Nabada Puntland iyo horumarka Puntland waa horumarkeenii, waa nabadeenii, Somaliya oo dhan baa ku faanaysa” ayaa ka mid ahaa hadaladiisa.
Federaalka ayaa uu sheegay in uu yahay cahdiga ku meel gaarka ah ee saldhiga u ah dastuurka dawlada federaalka ah, ayna u taal ummadda Somalidu in ay go’aan ka gaaraan mustaqbalka nidaamka dawliga ah ee ay iyaga u cuntama.
Mar uu ka hadlay shirka wada-tashiga Somalida ee bisha Sebtembar lagu wado in uu ka furmo Muqdsiho ayaa uu sheegay in ay isku af-garteen M/weyne Faroole in shirka wejigiisa 1-aad lagu qabto Muqdihso, halka wejiga 2-aadna lagu qaban doono Garowe.
Baahin: Isniin, Aug 29, Weriye Maxamed C. Koohsin ~ Daljir ~ Garowe. Puntland & dawlada federaalka ah oo kala saxiixday heshiis ka kooban 13 qodob; Aragtida shacabka Puntland ee booqashadii M/weyne Shariif; Xirsi M. Hilawle, maxada cusub ee Ahlu-sunna oo ka hadlay qorshaha cusub ee ururka.
Sarkaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda Puntland oo caawa lagu dilay Garoowe.